Asia – Myanmar Info Hub
Home Travel Asia
ကမ်းခြေသို့လည်ပတ်ချင်သူများအတွက် Bangkok Airways ပရိုမိုးရှင်း (၇ ရက်လက်မှတ်)
in : Asia, Products, Travel
Bangkok Airways ပရိုမိုးရှင်း (၇ ရက်လက်မှတ်) Samui – အမေရိဒေါ်လာ ၂၈၁ Krabi – အမေရိက်ဒေါ်လာ ၂၂၂ Phuket -အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၃၁ ယခုဈေးနှုန်းမှစတင်ပြီး ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ခရီးသွား နှင့်အရောင်းကာလ – ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ ထိ ခရီးဆောင်အိတ် ကီလို ၂၀ အသွားအပြန်နှင့် လေယာဉ်ပေါ်တွင် အစားအသောက် ပါဝင်ပြီးသားပါ ။ ပရိုမိုးရှင်း ထိုင်ခုံအရေအတွက်မှာ ကန့်သတ်ထား သည့် အတွက် နေ့ရက်တိုင်း အတွက် ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ ။ *********************************** လက်မှတ်များကို ၀ယ်ယူလိုပါက အောက်ပါဖုန်း နံပါတ်များ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါပြီ။ ၀န်ဆောင်ကြေး ထပ်မံ ပေးစရာ မလိုပဲဖုန်းဆက်မှာကြားရုံဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း အိမ်အရောက် လက်မှတ်များကို ၀န်ဆောင်ကြေးအခမဲ့ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးမှာပါ။ …
Bangkok Airways ပရိုမိုးရှင်း
in : Asia, Travel
မော်လ်ဒိုက် – ဒေါ်လာ၆၅၀ ဖနွမ်းပင် – ဒေါ်လာ ၃၄၀ ချင်းမိုင် ( ဘန်ကေက်) – ဒေါ်လာ ၂၁၀ ဖူးခက် ( ဘန်ကောက်) – ဒေါ်လာ ၂၉၅ ဒါနန် ( ဗီယက်နမ် ) – ဒေါ်လာ ၃၃၀ မှတ်ချက် – အနည်းဆုံး ၂ဦးသွားရပါမည်။ ခရီးဆောင်အိတ် ကီလို ၂၀ အသွားအပြန်နှင့် လေယာဉ်ပေါ်တွင် အစားအသောက် ပါဝင်ပြီးသားပါ ။ ပရိုမိုးရှင်း ထိုင်ခုံအရေအတွက်မှာ ကန့်သတ်ထား သည့် အတွက် နေ့ရက်တိုင်း အတွက် ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ ။ *********************************** လက်မှတ်များကို ၀ယ်ယူလိုပါက အောက်ပါဖုန်း နံပါတ်များ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါပြီ။ ၀န်ဆောင်ကြေး ထပ်မံ ပေးစရာ မလိုပဲဖုန်းဆက်မှာကြားရုံဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း …
Oway ရဲ့ ကိုရီးယား (5 ရက် ခရီးစဉ် ONLY – 1,060 USD)
ရန်ကုန် – ဆိုးလ် – နာမီကျွန်း – အဲဗားလန်း – Seoul Tower (5 ရက် ခရီးစဉ်) ***************************************************** ONLY – 1,060 USD အရမ်းအရမ်းတန်ပြီး ရှပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် မြင်တွေ့နေရသည့် ကိုရီးယား ဓလေ့ ရိုးရာ ပတ်ဝန်းကျင် တို့ ကို ကိုယ်တိုင်ခံစား လေ့လာနိုင်မည့် ခရီးစဉ် တစ်ခုကို #Oway မှ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ထွက်ခွာမည့် ရက်ကတော့ 04 October 2017 ကနေ 08 October 2017 အထိသွားရောက်လည်ပတ်မည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပတ်မည့် နေရာများကတော့ – စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည့် Everland theme park – UNESCO စာရင်းဝင် ဟွာဆောင်းခံတပ်မြို့ – နာမည်ကျော် Winter Sonata …
SOC မှ စီစဉ်သော မိုးရာသီပြည်ပအထူးခရီးစဉ်များ
စင်္ကာပူ ဈေးဝယ်ခရီးစဉ် ၄ရက်/၃ည 580 USD သြဂုတ် ၁၁-၁၄ စင်္ကာပူ-ဘာတန်(အင်ဒိုနီးရှား) ၄ရက်/၃ည 599 USD သြဂုတ် ၁၁-၁၄ ဘာလီ ၅ရက်/၄ည 720 USD သြဂုတ် ၁၈-၂၂ ဘာလီနှင့် ဂျာဗားကျွန်းအလယ်ပိုင်း ဗောရောဗုဒ္ဓ ၆ရက်/၅ည 890 USD သြဂုတ် ၁၈-၂၃ ဗီယက်နမ်-ပိာုချီမင်း-မွေ့နဲ-ပာနွိုင်း-ပာလောင်း-ရန်ကုန် ၆ရက်/၅ည 660 USD သြဂုတ် ၁၅ -၂၀ ဗီယက်နမ်-ပိာုချီမင်း-မွေ့နဲ-ကူချီ-ပိာုချီမင်း-ရန်ကုန် ၄ရက်/၃ည 345 USD သြဂုတ် ၂၅ -၂၈ ဗီယက်နမ်-ပာနွိုင်း-ပာလောင်း (အပျော်စီးသဘောင်္ညအိပ်)-ပာနွိုင်း ၄ရက်/၃ည 425 USD စက်တင်ဘာ ၈-၁၁ ပြာလဲ့ကြည်လင်နေတဲ့ ရေပြင်ကျယ် ဖြူဖွေးနုနေတဲ့ သဲမွမွလေးတွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲက နိဗ္ဗာန်ဘုံလေး Maldives ဆီသို့ .. (စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာ …
Singapore မှာ ဈေးဝယ်ထွက်ချင်သူများအတွက် အထူးဈေးနှုန်းနဲ့ခရီးစဉ်
Singapore မှာ ဈေးဝယ်လို့အကောင်းဆုံး “ Singapore Great Sales အချိန် ” ရောက်လာပါပြီ ! ! ! ခေတ်မှီတိုးတက်မှုတွေကို ရင်ခုန်ခံစားရင်း ဈေးဝယ်ထွက်ချင်သူများအတွက် သင့်တော်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ အကောင်းဆုံး စီစဉ်ထားတဲ့ ၃ညအိပ် ၄ရက် စကာင်္ပူ ခရီးစဉ်လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီနော် … ထွက်ခွာမည့်နေ့ရက်များ – August 10 မှစတင်ထွက်ခွာပြီး August 13 ပြန်ရောက်ပါမည်။ လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ….ခေတ်မီခမ်းနားလှတဲ့ အဆောက်အဦးတွေနဲ့အတူသစ်လွင်နေတဲ့ စကာင်္ပူမြို့ကြီးကအရင်ဆုံးသင့်ကိုကြိုဆိုနေမှာပါ… ပထမဆုံးစကာင်္ပူနိုင်ငံ၏ အထင်ကရနေရာ Merlion Park ,Fountain of Wealth ,Suntec City , Esplanadeတို့ကိုသွားလည်ကြမယ်.. ဒုတိယနေ့မှာ အဖိုးတန်စိန်ရတနာများထုတ်လုပ်ရောင်းချရာ ဌာနတစ်ခုဖြစ်သော စကာင်္ပူနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး Diamond Industry….. ပျိုပျိုအိုအိုအရွယ်သုံးပါးမရွေးရွေးချယ်သုံးစွဲနိုင်သော အလှကုန်ပစ္စည်း၊ရိုးရာဆေးနှင့် အလှဆီထုတ်လုပ်ရောင်းချရာ အရောင်းပြခန်း…. စကာင်္ပူ၏ နာမည်ကျော်ကြားလှသော …
လူအများကြီးလိုက်စုစရာမလိုပဲ ၂ယောက်တည်းရှိရုံဖြင့် သွားနိုင်မည့် ဗီယမ်နမ် ခရီးစဉ်
ခရီးထွက်ဖို့ လူအများကြီးလိုက်စုစရာမလိုပဲ ၂ယောက်တည်းရှိရုံဖြင့် ခရီးသွားနိုင်မည့် ဈေးလဲအရမ်းတန်တဲ့ ဗီယက်နမ်အလည်အပတ်ခရီးစဉ်လေးတွေကို Special Overseas Club Travel Management Co., Ltd. မှ စီစဉ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဟနွိုင်း -ဟလောင်း ၃ည/၄ရက် —————————$195 ဟနွိုင်း -ဟလောင်း (သဘောင်္ပေါ်ညအိပ်) ၃ည/၄ရက် —– $210 ဟနွိုင်း -ဟလောင်း -တမ်ကော့ ၃ည/၄ရက် ————- $200 ဟိုချီမင်း-ကူချီ-မဲခေါင် ၃ည/၄ရက် ————————–$210 အထက်ပါခရီးစဉ်များမှာ ဟိုတယ်၊ လေဆိပ်ကြိုပို့ ၊လည်ပတ်ခြင်း ၊ ဧည့်လမ်းညွှန် နှင့် Sightseeing နေ့များတွင် နေ့လည်စာပါဝင်ပါသည်။ ! လေယာဉ်လက်မှတ်မပါဝင်ပါ။ သွားမည့်နေ့ အပေါ်မူတည်၍ တွက်ချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်သိရှိစုံစမ်းလိုပါက ***************************** Phone Number : 09 26 111 9773~74~76 ,01 571615 …